राजनीतिमा भन्दा राम कुमारी झाक्री टिकटकमा सक्रिय रहदै ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – Khabar Patrika Np
राजनीतिमा भन्दा राम कुमारी झाक्री टिकटकमा सक्रिय रहदै ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २८, २०७७ समय: २३:४४:५३
रामकुमारी झाँक्री निकै चर्चित वामपन्थी युवा नेतृ हुन्। उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को अध्यक्ष भैसकेकी छन्। उनको जन्म २०३४ सालमा गुल्मीको मयाल पोखरी गाविस १ रत्नबहादुर र रनकुमारीकी छोरीका रूपमा भएको हो।
उनले २०६६ माघ २९ मा धनकुटा जिल्लाका पशुपतिबाबु पुरीसँग विवाह गरिन्। रामकुमारीको जीवनी ‘महिलाहरू कुनै पनि संगठनको नेतृत्व तहमा दाबी गर्दैनन्, गरिहाले पनि काम गर्न सक्दैनन्,’ एमाले विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिले रामकुमारी झाँक्रीलाई यस्ता कुरा खूब सुनाइन्थ्यो । नेपाली राजनीतिको इतिहासमा महिलाले राजनीतिक संगठन (महिला विभागबाहेक)को मुख्य पदमा रहेर काम गरेको उनले पनि भेटेकी थिइनन् । ‘समाज रूपान्तरण सम्भव छ’ भनेरै राजनीतिमा लागेकाहरूको पनि यस्तो मानसिकता देखेर रामकुमारीलाई अचम्म लाग्थ्यो ।
सामाजिक संजालको जमानामा नेतृ राम कुमारी झाक्री टिकटकमा पनि सक्रिय रहदै आएकी छन । उनका केहि रमाइला टिकटक भिडियोहरु तल हेर्नुहोस ।